गुदा सेक्स कसरी हुन्छ?
मनोविज्ञान र सम्बन्ध सेक्स
परम्परागत रूपमा मानिन्छ कि गुदा यौन सम्बन्धको जुनसुकै बलियो सेक्सको सबै यौन परिपक्व सदस्यहरूको लागि एक सपना हो, तर धेरै महिलाहरूले "म गुदा सेक्स गर्ने प्रयास गर्न चाहन्छु" तर सत्य भनेको छ कि तिनीहरू सबै प्रकारका डरले रोक्न सक्दछ। अनि तिनीहरूको बीचको प्रमुख स्थान डरलाग्दो छ कि गुदा यौन सम्बन्धमा दुखाइ हुनेछ, र निस्सन्देही, यो प्रकारको असाधारण आनन्दको स्वास्थ्यको सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी यो भन्न सक्दैनौं कि यी सबै डरहरू असाध्यै अपरिहार्य थिएन, तर सही प्वाइन्टको साथ, जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यो कसरी गर्ने, हामी अहिले र बुझ्दछौं।
गुदा सेक्समा संलग्न हुन हानिकारक छ?
यस प्रकारको सान्त्वनाको विरुद्ध धेरै चेतावनीहरू छन्, केही शोधकर्ताहरूले पनि गुदा सेक्सले कोणम्यानको क्यान्सरको खतरा बढाउँछ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। निस्सन्देह, जब तपाई यस्तो अनौपचारिक यौन सम्बन्धमा संलग्न हुनुहुन्छ त्यहाँ केही जोखिम हो, तर यदि तपाईंले सुरक्षा नियमहरू पालन गर्नुभन्दा अप्रिय अप्रिय परिणामहरू रोक्न सक्दछ।
तपाईंसँग गुदा सेक्सको बारेमा कति पटक हुन सक्छ?
तपाईं गुदा सेक्समा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास, तपाईं कति चाहानुहुन्छ, गलत छ। यस क्षेत्र को लगातार उत्तेजना संग, स्पेंटिनेटर धीरे धीरे आराम गर्दछ, आफ्नो कार्य को प्रदर्शन को क्षमता खोने, यो मल र गैस को बनाए राखन को लागि। यसैले, हरेक दिन आफैलाई खुसी पार्न र यो किसिमको सेक्स संग साझेदार यसको लायक छैन। तर "पछिबाट जाँदै" को लागि एक दिन एक महिना आवंटित अत्यधिक सावधानी हुनेछ।
के गर्भवती हुन सक्छ गुदा सेक्स?
अधिकांश अवस्थामा, गर्भावस्थाको समयमा गुदा सेक्स निषेध गरिएको छ, र यही कारण हो:
योनिमा पथोजेनिक माइक्रोफ्लोरा को परिचय को जोखिम धेरै अधिक छ, जो विशेष रूप देखि गर्भावस्था मा खतरनाक छ, तपाईं कन्डोम संग जोखिम को कम गर्न सक्छन्;
यस अवधिको समयमा गुप्त वरिपरि छाला धेरै पतली हुन्छ, जसले गुदा रक्तचापको खतरा बढाउँछ;
गर्भावस्था को समयमा, बवासीर प्रकट हुन सक्छ, र गुदा सेक्स उनको सूजन को लागी, यो संभावना को कम गर्न को लागि यो स्नेहक को उपयोग को आवश्यकता हो।
गर्भवती समयमा गुदा सेक्सको लागि मात्र कारण ऊतकको राम्रो लोचको कारण पीडाको अनुभवको संभावनामा कमी छ।
केटीसँग गुदा सेक्स छ?
अक्सर, महिलाहरु लाई आफ्नो पार्टनर को अनुपालन मा गुदा सेक्स को लागी सहमत छ, र उनि स्वयं यस प्रक्रिया देखि केहि राम्रो को आशा गर्दैनन्। "आत्म-बलिदान" को यस्तो मनोवृत्ति संग कुनै खुशी र कुनै प्रश्नको बारेमा कुरा गर्न प्राकृतिक छ। यसकारण, यदि कुनै कारणको लागि यो प्रकार को सेक्स तपाईंको लागि स्वीकार्य छैन, तब तपाइँ यसलाई सहमत हुनुपर्दैन। साथै यो सम्झनाको लायक छ कि पहिलो अनुभव धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यदि यो विफल भएमा, महिलालाई प्रक्रियाको आनन्द लिनको लागि यो धेरै गाह्रो छ (र असम्भव पनि)। यो हुनदेखि रोक्न, पहिलो सम्पर्कमा मानिसको अत्यन्त चकित र सतर्क हुनुपर्छ, राम्रोसँग, निम्न बिन्दु बिर्सनु हुँदैन।
पहिलो नजरमा, पहिलो गुदा सेक्स कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न, केही हदसम्म हास्यास्पद देखिन्छ, कस्तो प्रकारको ज्ञान हुन सक्छ? तर सबै सजिलो छैन, अचम्मलाग्दो आनन्दको लागि गुदा खुल्ला उद्देश्य छैन, र त्यसैले उचित तैयारी बिना तपाईं धेरै अप्रिय परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रारम्भिक caresses को एक प्रश्न हो, यस अवस्थामा उनीहरुको महत्व अधिकतरित हुन सक्दैन। प्रचार बिना कुनै विश्राम हुनेछैन, र बिना यसको कुनै सेक्स हुनेछैन।
यदि अपर्याप्त उत्तेजना छ भने, क्लटरिसको पिटाइ वा अल्कोहलको एक सानो खुट्टा मद्दत गर्न सक्छ।
यदि डरलाग्दो छ कि गुदा सेक्सले चोट पुर्याउँछ, छोड्नु नदिनुहोस्, त्यसपछि तपाई अग्रिममा एक छेद विकास गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यस उद्देश्यका लागि त्यहाँ विशेष गुदा प्लग छन्।
गुदा सेक्स अभ्यास गर्दा, स्नेहक र कन्डोमको प्रयोग अनिवार्य छ। साथै, कुनै कन्डोम परिवर्तन नगर्न नसक्ने वैकल्पिक गुदा र योनि सेक्स नगर्नुहोस् - यी दुई क्षेत्रहरूको माइक्रोफ्लो मिश्रित हुन सक्दैन।
व्यवसायमा पुग्नु अघि, साझेदारसँग व्यवस्थित गर्नुहोस्, दुखाइको अवस्थामा यो बन्द हुनेछ।
दर्दनाक संवेदना नजिकै मासिक धर्म संग सम्बद्ध हुन सक्छ, र यस अवधि को लागि यो राम्रो छ एक प्रयोग योजना छैन।
तपाईं गुदा सेक्स गर्नु अघि तपाईंले शौचालय भ्रमण गर्नु पर्दछ, तपाईले पनि एनेमा गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो केवल पहिलो पटक मात्र हो। शरीरको लागि सफाई प्रक्रियाहरूसँगको आकर्षण सबै उपयोगी छैन।
यदि यो क्षेत्र मा दरार वा सुँगुर भएमा तपाई गुदा सेक्स कोसिस गर्न सक्नुहुन्न।
गुदा यौन सम्बन्ध साझेदारहरूको भरोसा र भरोसाको पुष्टि हुन सक्छ, विविधता र सुखद जीवनमा एक अंतरंग जीवन ल्याउन। तर कुनै पनि अवस्थामा, यो अभ्यास गर्नुहोस् वा होइन, तपाईं मात्र निर्णय गर्नुहुन्छ, र तपाईंको निर्णय मध्ये कुनै पनि सही हुनेछ।
पुरुषका लागि सेक्सको हाँगाहरू
खुट्टा फेरी के हो?
असामान्य स्थानहरूमा लिंग
कुमारीता कसरी हराउने?
कोकेट्री - यो के हो र एक मान्छे संग छेड़छाड कसरि गर्ने?
सेक्सको लागि असामान्य स्थिति
हर्म अफ हस्तमैथुन
पछाडि "मानिसको पछि"
"एक महिलाको रूपमा" - एमिली नागोस्कीबाट किताबको समीक्षा
पोज "चिया थाम"
सेक्स को लाभ
पहिलो गुदा सेक्स
स्नान को छत को लागि इन्सुलेशन
ईवा मन्डेन्सले अनौपचारिक रूपमा "गोल्डन ग्लोब" मा आफ्नो प्रेमीको भाषणमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे
बच्चाहरु को लागि Casseroles
Palazzo पतलून - यो के छ र के गर्ने छ?
Dandelion जड - आवेदन
मास्क: "एक महिलाले संसारको शासन गर्नु पर्छ!"
प्रेस कसरी पम्प गर्ने?
माडी जेइगलरले म्याग्दी टाइमको सबैभन्दा प्रभावशाली किशोरको रुपमा मान्यता पाएको छ
लक्षण संग टेरजिन
रोममा ट्रेभी फाउटेनन
Eleutherococcus tincture - प्रयोग को लागि संकेत
बालबालिकाको लागि स्प्रिंग शिल्प
प्रारम्भिक चरणहरूमा मृत गर्भावस्थाको लक्षण - खतरनाक लक्षणहरू कसरी प्रतिक्रिया दिने?
चिफन ब्लाउज शैलीहरू
मासु पाइको लागि आटा
मोडेल जो मार्नेले मलाई मेगन मार्केल को बारे मा नस्लवादी टिप्पणी को अनुमति दिए
कपडाहरू Bachelorette पार्टीको लागि
बर्नार्डो बर्टोलुकीको मुखबाट "द टाउको टंगीो पेरिस" को बारे मा अचम्मलाग्दो सत्य